DVI - Xirfadaha Muuqaalka Dijital ah - Qeexitaan iyo Sharaxaad
Tiyaatarka Aqalka Fikradaha Muhiimka ah
Xidhiidhada DVI - Waxa aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Waa maxay DVI
DVI waxay u taagan tahay Wareegga Muuqaalka Dijital ah laakiin waxaa kale oo loo yaqaan 'Video Video Interface'. Qaabka DVI wuxuu leeyahay saddex tilmaam:
DVI-D (loogu talagalay in laga gudbo calaamadaha muuqaalka digital-ka)
DVI-A (loogu talagalay in laga gudbo calaamadaha analogga kaliya)
DVI-I (loogu talagalay in laga gudbo calaamadaha digital iyo analogba).
Inkasta oo xajmiga fiilada iyo cabbirka ay isku mid yihiin nooc kasta, tirada biinadu way kala duwan tahay shuruudaha nooc kasta.
DVI waa ikhtiyaar isku xiran oo ku yaal muuqaalka PC, laakiin ka horeeya HDMI ayaa loo diyaariyey codsiyada masraxa guriga, DVI waxaa loo isticmaalay in lagu wareejiyo calaamadaha muuqaalka muuqaalka ah ee ka yimid qalabka DVI-qalabeysan (sida ka soo duubay DVD-ga DVD, qalab ama satellite sanduuq) si toos ah loogu muujiyo muuqaal fiidiyoow (sida HDTV, kormeeraha fiidiyowga, ama Muuqaal Video) kaas oo sidoo kale leh xiriirka DVI.
Meelaha masraxa guriga, haddii xiriirka DVI la isticmaalo, waxay u badan tahay nooca DVI-D.
Qalabka DVD-ku qalabaysan DVI ama aaladaha kale ee qalabka guriga ayaa ku gudbin kara calaamadaha fiidiyowga leh qaraarada ilaa 1080p bandhig. Iyadoo la adeegsanayo natiijooyinka xiriirka DVI ee muuqaal tayo leh oo tayo sare leh oo ka yimaada calaamadaha muuqaalka caadiga ah iyo kuwa sare, marka loo eego isticmaalka Composite , S-Video , oo laga yaabo inuu u dhigmo ama ka fiican yahay isku-xirnaanta fiidiyowga .
DVI iyo HDMI
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la tilmaamo in laga soo bilaabo hiwaayadda HDMI oo ah heerka caadiga ah ee masraxa guriga ee loogu talagalay maqalka iyo fiidiyowga, ma heli doontid fursado DVI-ku-xirmo ah casriga casriga ah iyo 4K Ultra HD TVs, laakiin waxaad arki kartaa mid ka mid ah waxqabadka HDMI waa la isku duubay iyada oo la adeegsanayo qalab wax lagu duubo oo la adeegsado marka la isku xiro ilaha DVI ee TV-ga. Weli waad la kulmi kartaa kiisaska DVD-yada waaweyn iyo TV-yada halkaas oo DVI loo isticmaalo halkii laga heli lahaa HDMI, ama waxaa laga yaabaa inaad leedahay TV-ka weyn oo ay ku jiraan DVI, ama labada ikhtiyaar ee DVI iyo HDMI.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in ka duwan HDMI (oo awood u leh in ay ka gudbaan calaamadaha fiidiyoowga iyo codka), DVI waxaa loogu talagalay keliya inay gudbiso Calaamadaha Video. Haddii aad isticmaasho DVI si aad ugu xirto qalabka wax lagu duubo ee TV-ga ah, haddii aad sidoo kale codsatid cod, waa inaad sidoo kale sameysaa isku-xirka codka ah ee TV-gaaga - badanaa adiga oo isticmaalaya RCA ama 3.5mmm Analog audio audio. Xidhiidhada codka ee loogu talagalay in laysku geeyo la socoshada DVI waa in lagu dhejiyaa talada DVI.
Sidoo kale, waxyaabo kale oo ay tahay in la fiiriyo waa nooca xiriirka DVI ee loo isticmaalo jawiga masraxa guriga ma dhaafi karo calaamadaha 3D oo isticmaalaya heerarka ku yaala Blu-ray Disc iyo HDTV , mana dhaafi doono calaamadaha fiidiyoowga 4K. Si kastaba ha noqotee, DVI way u gudbin kartaa qaraarada ilaa 4K codsiyada kombiyuutarada qaarkood, adigoo isticmaalaya habka kala duwan ee pin. Sidoo kale, xirmooyinka DVI ma gudbin karaan HDR ama calaamadaha yaryar oo midabkiisu badan yahay.
Intaa waxaa dheer, haddii aad haysato TV-yo weyn oo HDTV ah oo aan lahayn HDMI, laakiin kaliya xidhiidhka DVI, laakiin waxaad ubaahan tahay inaad ku xirto aaladaha ilaha HDMI (sida qalabka Blu-ray, kor u kicinta DVD-ga, ama sanduuqa kore) TV-ga, marar badan waxaad isticmaali kartaa adreeska HDMI-ilaa-DVI.
Cilmi la mid ah, haddii aad haysato DVD-yo ama qalab kale oo keli ah oo kaliya oo haysta wax-soo-saarka DVI oo u baahan inuu isku xiro TV oo kaliya oo leh HDMI-ga, waxaad isticmaali kartaa nooc isku mid ah HDMI-ka-DVI xiriirkaas.
Si kastaba ha noqotee, marka la isticmaalayo qalab DVI-to-HDMI ah si loogu xiro ilaha DVI ee muuqaalka muuqaalka HDMI, ama ilaha HDMI ee TV-ga DVI, waxaa jira xayiraad. Iyadoo loo eegayo baahida qalabka muuqaalka qalabka ee HDMI si ay u awoodaan inay "handshake" leh qalab kumbuyuutar ah (ama si la mid ah), mararka qaarkood qalabka muujinaya ma garanayo ilaha si sharci ahaan ah (ama kan kale), taasoo keentay qalfoof ( sida bannaan, baraf, ama muuqaal sawir leh). Qaar ka mid ah daaweynta suurtogalka ah, tixraac qodobkayaga : Dhibaatooyinka HDMI Connections .
Muxuu yahay TV-yada LED-ka?
Maxay yihiin qaababka DVD ah ee la kaydin karo?
Waa maxay Farqiga u dhaxeeya DVD iyo Video CD?
Dhamaan Sawirada 3DTV
VHS VCR - Dhamaadka Ugu danbeyntii waa yimaadaa
Xaqiiqda ku saabsan TV-yada loo yaqaan "So-called"
Maxay Yihiin Wadahadaladooda?
Diiwaanada DVD-ga Xirfadaha (Antenna, Cable, Etc)
Mail - Command Linux - Unix Command
Maxay Tahay Ait File?
Waa maxay Tallaabada Tallaabada (PSR)?
Qeexitaanka Maareynta Maareynta Maareynta Mobile
Ugu sareeya 10 Waa inuu leeyahay Xirfadaha Shaqada ee Webka
Brother ImageCenter ADS-3000N Scanner Document
Sidee loo xereeyaa jilayaasha iPhone ama iPod Touch
Howlaha Qandaraaska Adeegga: Bedelida Wareegyada Telefoonka gacanta
Sida loo Isticmaalo Appartska Dareeraha ee Dareeraha
Wireless Wireless: Soodejinta WirelessPoaming MetroPCS
Left 4 Dhimashada 2 Shuruudaha Nidaamka
IPad leh Retina Display iyo GPS Navigation iyo Khariidadaha
Muuji Faylasha Dheeraad ah ee Liiska Codsiyada Ugu dambeeyay ee Word 2016 ee Windows
Ku qor POP, IMAP, iyo Gaadiidka SMTP ee Mozilla Thunderbird
Sida loo raadiyo Ask.com
Sidee loo bedelaa Xakamaynta ama Xakamaynta Joogta ah
Mail2web-Web Helitaanka adeegga POP iyo IMAP
Wadaagista Dukumintiyada Shabakada Macada ee OS X 10.5
Horumarinta Barnaamijyada Caafimaadka - Android Vs. iPhone ee caafimaadka
Sida loo dhiso Nidaamka Gawaarida Stereo iyo Ku rakib
SSID iyo Networking Network